65000 ọkachamara ọbịa gara ngosi ileta na ịzụta, ahụmịhe bara uru nke ngwongwo ngwongwo texti a dị elu - Error 404 (Not Found)!!1
The requested URL /translate_a/t was not found on this server. That’s all we know. , Ltd
FH-EAR eriri igwe
Ị nọ ebe a : Ulo >ozi >Akụkọ >ỌZỌ NEWS
65000 ọkachamara ọbịa gara ngosi ileta na ịzụta, ahụmịhe bara uru nke ngwongwo ngwongwo texti a dị elu
Oge: 2021-07-02 Na-akụ:
The akwa igwe nkwonkwo ngosi, nke na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ akwa akwa maka 12 afọ, emeela mgbalị dị ukwuu iji weghara oge dị oke egwu nke mgbake akụ na ụba na oge ọrịa na-efe efe na afọ mmeghe nke atụmatụ afọ iri na anọ nke afọ ise., ma raara ezigbo oriri na ọ effectiveụ safeụ nye ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ. N'ime oge ngosi ụbọchị ise, na akwa igwe nkwonkwo ngosi webatara 65000 ọkachamara ndị ọbịa n'ụlọ na mba ọzọ. N'oge mgbake nke ụlọ ọrụ, igba ogwu na ogwe aka maka mmepe di elu nke ulo oru.
Dika ihe ngosi izizi nke uwa nke uwa na akwa igwe mgbe oria ojoo a gachara, ihe ngosi igwe a nke textile bu eburu olile anya nke otutu ndi oru textile. Ya mere, ndị na-ahazi ihe ngosi ahụ ga-abụ nkwadebe nke ọrụ nchekwa na ọrụ dị ka ihe kacha mkpa iji mezuo. Na-ebuli nkọwa sitere n'akụkụ dị iche iche iji hụ na njikọ dị nro nke akụkụ niile nke ikere na ilele, ma nyere ndị ngosi na ndị ọbịa aka ijikọ nke ọma.
Tupu ihe ngosi, imeghe ukara website + WeChat abụọ ntinye tupu ndebanye, ma kwalite usoro ịkpọ oku onye ahịa ahụ ọzọ, iji kwado onye ngosi ngosi iji zipu akwụkwọ ozi ịkpọ oku na iji pịa otu ekwentị iji kpọọ ndị ahịa ka ha lelee ihe ngosi ahụ. N'ime oge ngosi ụbọchị ise, usoro ịkpọ oku ndị ahịa na-aga n'ihu na-emeghe, na ndị ngosi nwere ike ịkpọ òkù n'oge ọ bụla. Ndị edebanyere aha ha nwere ike ịbanye na saịtị, nyochaa koodu jiri otu igodo inweta kaadi obi, na contactless ọrụ na-azọpụta oge na mgbalị, na odikwa na ntukwasi obi.
E kewara ụlọ ndị ahụ dị ka otu ndị si dị, na ụkpụrụ ọkọlọtọ nghọta ụkpụrụ doro anya. Ndị na-eme ihe ngosi na ndị nleta nwere ike ịgbaso nduzi ngwa ngwa iji chọta ụlọ ntu kwekọrọ. Informationlọ Ọrụ Ihe Ọmụma nke ụlọ ihe ngosi nka ọ bụla na-enye nduzi nduzi na ihe nduzi ndị ọzọ, ma zaa ụdị nsogbu niile zutere na usoro nke ikiri ihe ngosi ahụ n'oge ọ bụla.
Iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị na-ege ntị na ndị ngosi, onye nhazi ahụ na-etinyekwa ihe mgbochi ọrịa na ọfịs ozi ọ bụla, nke mere na ndị na-ege ntị na ndị na-eme ihe ngosi chọrọ nwere ike ịnweta ha n'oge ọ bụla. E nwere ọdụ ụgbọ ala mgbagharị na mpaghara ọdịda nke isi n'èzí ụlọ ngosi ngosi, nke dị mfe maka ndị ngosi na ndị ọbịa ịhapụ ụlọ ngosi ngosi, ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ njem ndị ọzọ kwa ụbọchị. Obodo mkpakọrịta, ebe ọrụ, Office nke arịa ọgụgụ isi, ụlọ ọrụ ozi ọma, ụlọ ọrụ nchịkwa ụlọ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere njikọ chiri anya iji nye ọrụ maka ndị ngosi na ndị ọbịa n'oge ọ bụla.
Nyara ụgbọ mmiri gị wee fekwasị ifufe na ebili mmiri!
2022, na-atụ anya ịhụ gị ọzọ!
China International Textile Machinery Ngosi 2020 na ihe ngosi ITMA Asia bịara na njedebe nke ọma,
Daalụ niile maka nnọgidesi ike gị na ụlọ ọrụ.
Ka anyị zute ọzọ na Nọvemba 20-24, 2022!
Osote : n'anya Seoul